စိတ်ကြိုက်အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သောခွေး leash, ခွေးကော်လာစက်ရုံနှင့် leash | QQPets
Qqpets ၏ရည်ရွယ်ချက် - အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေဆုံးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်
LED Retractable ခွေး leash
ခွေး leash စက်ရုံ
polyester ခွေး leash
polyester ခွေးကော်လာနှင့် leash
polyester ခွေးကြိုးနှင့် leash
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ "ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အရည်အသွေးကောင်းခြင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သောယုံကြည်မှု,
အဓိကထုတ်ကုန်များ: အကောင်းဆုံးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောခွေး leash, ခွေးကော်လာ, ခွေးကြိုးနှင့်ခွေးရေဘူး။
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောခွေး leash (LED LED နှင့်အတူ)မှောင်မိုက်၌အကောင်းဆုံးမြင်သာမှုအတွက်တောက်ပသောလက်နှိပ်ဓာတ်မီးသည်ညအချိန်တွင်လုံခြုံမှုကိုတိုးတက်စေသည်။သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုအကောင်းဆုံးဂရုစိုက်ပါ။ သင့်ခွေးကိုလမ်းလျှောက်ခွင့်ပြုပါ။Guangzhou Qqpets Pet Provests Pet Prodotes Co.23 တွင် Dalang အလယ်တန်းလမ်း, ကွမ်ကုန်းခရိုင်, ဘာကင်းဒွန်ခရိုင်, Baiyun ခရိုင်, Bairadong ခရိုင်
လက်ကားမြင့်မားသောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အိတ်ဆောင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အိတ်ဆောင်ရေဘူး - ဂွာဆိုက Qqpets Pet Prodotes Peats Permes Co. , Ltd.
အကောင်းဆုံးခရီးသွားအသုံးအဆောင် - Qqpets အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးရေဘူးသင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်ဓါတ်ကိုပြန်လည်သောက်သုံးပါစေ, သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်ဓါတ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါစေ။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ။ရေမသောက်သောရေကိုပုလင်းထဲသို့ပြန်ညှစ်နိုင်သည်။Guangzhou Qqpets Pet Prodotes Pet Prodotes Pet Products Co.23, Dalang အလယ်လမ်း, Dalang အလယ်လမ်း, Bိုင် Yangzhou City, Guangzhou City, Guangdong ပြည်နယ်,
စိတ်ကြိုက် mentifunctional bungee ကားထိုင်ခုံခါးပတ်ခွေး leash
ပျော့ပျောင်းသော polyester ပစ္စည်းများနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအစင်းသည်ပျော့ပျောင်း။ တာရှည်ခံသည်။ ပြီးတော့သင်အရောင်နှင့်အရွယ်အစားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။အီးယူစံရှိသည့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ, ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကုန်ကြမ်းများရှိသည်။နွေ ဦး ကားထိုင်ခုံခွေး Leash သည်သင်ကားမောင်းနေစဉ်သင့်ခွေးကိုလုံခြုံစွာထားနိုင်သည်။
ဖက်ရှင်စိတ်ကြိုက် polyester multicolor / အစိုင်အခဲအရောင်ခွေးကော်လာနှင့် leash set
ရောင်စုံကော်လာသည်သင်၏ခွေးပုံမှန်အတိုင်းစွန့်စားမှုလမ်းကိုပိုမိုအာရုံစိုက်စေနိုင်သည်။ ရောင်စုံသာမကကြာရှည်ခံရုံမသာ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရောင်ကိုကော်လာနှင့် leash တွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အိုခေျာင်း&ODM ကိုကြိုဆိုပါတယ်
Professional Polyester Sublimation ခွေး Collars / Leashes / Hernesses ထုတ်လုပ်သူများ
Sublimation Dog Collars / Leashes / ကြိုးများကိုဒီဇိုင်းနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်Guangzhou Qqpets အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန် Co. , Ltd.ခွေးကော်ပိုရေးရှင်း / leashes / ကြိုးအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်။ စိတ်ကြိုက် polyester ခွေး collars / leashes / ကြိုးများကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်သောထုံးစံပုံနှိပ်ထားသောခွေး Bandana, ခွေးအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် bandana ပဝါ - Qqpets အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ
သင်၏လိုဂိုသို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကြံဥာဏ်များပေးခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ 14 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များကိုကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းဖြင့်အခမဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ အကယ်. သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုခွေး bandana ရောင်းရန်နှင့်ထုတ်လုပ်သူကိုရှာဖွေလိုပါကသင်၏ဒီဇိုင်းများကိုအသက်ဝင်စေရန်ကြိုးစားလိုပါက။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဤနေရာတွင်ထားခဲ့ပါ, ကျွန်ုပ်တို့သည် 24 နာရီအတွင်းသင့်အားပြန်လည်ဖြေကြားပါမည်။Ltd. , ခွေး Bandana ကွမ်ကျိုး QQPETS အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များ Co. , Introto NO.23 အတွက်, Ltd. ကွမ်ကျိုး QQPETS အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များ Co. , Dalang အလယျပိုငျးလမ်း, Baiyun ခရိုင်, ကွမ်ကျိုးစီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်ပင်မထုတ်ကုန်,
ခွေးကြိုးကိုအသုံးချခြင်းသည်သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်, ပစ္စည်း, ပုံစံနှင့်လိုဂိုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားခွေးများအတွက်လေးအရွယ်အစားလေးခုရှိသည်။ ညှိနိုင်သောထိထိံင်ခြင်း၏နှစ်ဖက်စလုံးအားဖြင့်ခွေး၏သက်သောင့်သက်သာရှိစေရန်အရွယ်အစားကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်ပြည့်စုံသောကြိုးကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်သူများ Professional Soft Soft Pet Dog ကြိုး
QQSpets ထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သူ Performance Peat Pet Dog Hatness ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း, အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်စွာထိန်းသိမ်းထားသည်& ထိရောက်သောအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။သင့်အတွက်အခမဲ့ဒီဇိုင်း .oem / odm ကိုကြိုဆိုပါတယ်။Guangzhou Qqpets အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန် Co. , Ltd.ခွေးကော်ပိုရေးရှင်း / leashes / ကြိုးအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်။ စိတ်ကြိုက် polyester ခွေး collars / leashes / ကြိုးများကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ချစ်စရာနှင့်တက်ကြွမြင့်မားသောအရည်အသွေးအဝါရောင်ပျားခွေးကော်လာ HALE HALENTAL leash set ။ပေါ့ပါးသောအခြေခံစတိုင်သည်ထုတ်ကုန်ကိုတာရှည်ခံပြီးစျေးပေါစေသည်။၎င်းကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း / လမ်းလျှောက်ခြင်း, ပြေးခြင်း / ခရီးသွားခြင်း / ခရီးသွားခြင်းတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထုံးစံအတိုင်းပုံစံခွေးကြိုးတပ်ဆင်ထားသောထုတ်လုပ်သူ Buy | QQPets
OEM စိတ်ကြိုက်ပုံစံခွေး HERNE ကိုထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်လုပ်သူ, ခွေးကြိုးကြိုးနှင့်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ, ထုံးစံအတိုင်းပုံစံဒီဇိုင်း။ မေးလျှောက်ပါ။အရည်အသွေးမြင့်ခွေး HALDENT SET ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ, ထုံးစံအတိုင်းပုံစံခွေး Harness တွင်အထူးပြု Qqpets များသည်အမြောက်အများကို0ယ်ယူသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
လက်ကားခွေးကော်လာ Leash Herness ကတိကျသောပုံစံထုတ်လုပ်သူကိုသတ်မှတ်ပါ
Oem dog collash leash herness ထုတ်လုပ်သူ, Qqpets မှသတ်မှတ်ထားသောခွေးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမေးမြန်းပါ။အရည်အသွေးမြင့်ခွေးကော်လာ Leash Herness Set ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူခွေးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအထူးပြု Qqpets set, ဆက်သွယ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
Ins Hot LoT Gradient Dog ကော်လာကြိုးကြိုးလက်ကိုင်ဖုန်း -qqqpets
အရည်အသွေးမြင့် Ins Hot Gradient Gradient Dog ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ Set, ထုံးစံခွေးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအထူးပြု Qqpets ။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!Professional Dog Herness Set ထုတ်လုပ်သူ, QQpets အကြောင်းအသေးစိတ်။လျှော့စျေးကိုလာနှင့်ယခုတိုင်ပင်ပါ!
သင်တို့ရှိသမျှကိုအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သော stop ဖြေရှင်းချက်ပေး။
●1. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်:သုံးစွဲသူများသည်လိုချင်သောစတိုင်, ပစ္စည်း, အရွယ်အစားနှင့်သင်လိုချင်သောလိုအပ်ချက်များကိုပြောပြသည်။
●2. ဒီဇိုင်း -သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကောင်းဆုံးစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်များကိုသေချာစေရန်စီမံကိန်း၏အစီအစဉ်မှပါ0င်သည်။
●3. အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောကိုထိန်းသိမ်းထားသည်& ထိရောက်သောအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်။
●4. အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု:နမူနာကိုပုံစံ, function နှင့်ဝယ်လိုအားများအရဒီဇိုင်းအတွက်အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုသည်နောက်အဆင့်ဖြစ်သည်။
●5 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး0န်ဆောင်မှုများ,
Guangzhou Qqpets အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန် Co. , Ltd.
●Guangzhou Qqpets သည် Guangzhou စီးတီးဖြစ်သော Guangzhou စီးတီးဖြစ်သော Guangzhou စီးတီးတွင်တည်ရှိပြီး 2005 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လေးနက်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံများရှိသည့်လူသိများသောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကော်လာများနှင့် Leashes, ခွေးကော်လာများ, ခွေးတစ်ကောင် leash များ, ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းခွေး leash, ခွေးသည်ကြိုး, ကြောင်ကော်လာနှင့်ရောင်းချခြင်း,
●ကျွန်ုပ်တို့တွင် EU Standard သို့ရောက်ရှိသည့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ, ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေးဌာန, အပူပိုင်းငွေဖြည့်စွက်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဆင်ပြေသောပိုးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, ယက်လုပ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ။
●ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်စီးပွားရေးအတွက်ထိရောက်သောမြန်ဆန်စွာရပ်တန့်ရန်အခွင့်အလမ်းများပေးရန်အတွက်ဒီဇိုင်း, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ။
●ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ "ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အရည်အသွေးကောင်းခြင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကောင်းသောယုံကြည်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သောယုံကြည်မှု, သင့်အတွက်အရောင်း0န်ဆောင်မှု။
အမည်: Lei Haiyan
ဖုန်း: + 86-13500023678